သန္ဓေတားဆေးကတ်နှင့် သွေးခဲခြင်းပြဿနာ – MATE
သန္ဓေတားဆေးကတ်သောက်ချင်လို့ ဆရာဝန်နဲ့သွားဆွေးနွေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ သိပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်က မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ရာဇဝင်ကိုမေးရင် နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်တာနဲ့ ခြေထောက်မှာ သွေးကြောထုံးတာ သွေးခဲတာ ဖြစ်ဖူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်း မေးတတ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းက အရေးကြီးလား။ ဒါတွေရှိနေရင် သန္ဓေတားဆေးကတ်ကို သောက်လို့ရနိုင်သလားဆိုတာ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
သွေးခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း (သို့) သွေးကြောထုံးခြင်း?ခြေထောက်မှာ ဖြစ်တဲ့သွေးခဲဆိုတာ ခြေထောက်ထဲမှာသွေးလှည့်ပတ်ပို့ဆောင်နေတဲ့ သွေးပြန်ကြောထဲမှာ ဖြစ်တာပါ။ ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောတွေမှာ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ အပေါ်ယံသွေးပြန်ကြောနဲ့ ပိုနက်တဲ့ ခြေထောက်အတွင်းပိုင်း ကြွက်သားတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေပါ။ ဒီခြေထောက်သွေးခဲတွေက ကြွက်သားတွေကြားထဲက အောက်ဘက်သွေးပြန်ကြောတွေထဲမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
သွေးစီးတာ နှေးကွေးပြီး သွေးခဲလွယ်တဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ အသက်ကြီးခြင်း၊ ခွဲစိတ်မှုကြီးကြီးမားမား လုပ်ထားခြင်း (ဝမ်းဗိုက်ခွဲစိတ်မှု၊ ပေါင်ရိုးခွဲစိတ်မှု)၊ အချိန်ကြာ မလှုပ်မရှားနေရခြင်း (ဥပမာ လေကြောင်းခရီးရှည်သွားခြင်း၊ ခြေထောက်ကျိုးခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်း)၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ ကလေးမွေးဖွားပြီးချိန်၊ ဟော်မုန်းပါတဲ့ သန္ဓေတားနည်းလမ်းများ၊ အရေပြားလေးဘက်နာရောဂါ၊ မိသားစုထဲမှာ ခြေထောက်သွေးခဲဖြစ်ဖူးတဲ့ရောဂါရာဇဝင်ရှိသူများ၊ သွေးဆုံးပြီး ဟော်မုန်းဆေးသောက်နေသူများ၊ အရင်က ခြေထောက်သွေးခဲဖြစ်ဖူးသူများ၊ အဝလွန်ခြင်း၊ ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ကင်ဆာရောဂါကုသမှုခံနေသူတွေမှာ ခြေထောက်သွေးခဲဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်း ဖောရောင်လာတာ၊ နာကျင်တာ၊ ပူနေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်သွေးခဲရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ရပ်ကတော့ ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောထဲက သွေးခဲက ပြုတ်ထွက်၊ ပဲ့ထွက်သွားပြီး သွေးပြန်ကြောတွေကတဆင့် အပေါ်တက်သွားရင် အဆုတ်ထဲမှာရှိတဲ့ သွေးကြောတွေမှာ သွားပိတ်တတ်ပါတယ်။ ပိတ်တဲ့သွေးခဲအရွယ်အစားပေါ် မူတည်ပြီး အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သန္ဓေတားဆေးကတ်နဲ့ ခြေထောက်သွေးခဲ ဆက်စပ်ပုံ?
သန္ဓေတားဆေးကတ်မှာ Oestrogenလို့ခေါ်တဲ့ အမျိုးသမီးဟော်မုန်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းပမာဏများရင် သွေးကြောတွေထဲမှာ သွေးခဲဖြစ်ပေါ်မှုကို အားပေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် သန္ဓေတားဆေးကတ်ကို အကြာကြီးသောက်ရင် ခြေထောက်သွေးခဲဖြစ်မှုကို အားပေးသလိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Oestrogen ဟော်မုန်းမပါဘဲ Progesterone ဟော်မုန်းတစ်မျိုးပဲပါတဲ့ သန္ဓေတားနည်းလမ်းတွေမှာတော့ ခြေထောက်သွေးခဲဖြစ်ပွားမှုနှုန်းက အလွန်နည်းပါတယ်။
သန္ဓေတားဆေးကတ်မသုံးသူတွေရယ်၊ သန္ဓေတားဆေးကတ်သုံးသူတွေရယ်၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေနဲ့ ကလေးမွေးပြီးစမိခင်တွေရဲ့ သွေးခဲဖြစ်မှုနှုန်းကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်?
၁) ဆေးကတ်မသုံး၊ ကိုယ်ဝန်မရှိသူတွေရဲ့ အယောက် တစ်သောင်းမှာ ၅ ယောက်
၂) သန္ဓေတားဆေးကတ်သုံးသူတွေရဲ့ အယောက် တစ်သောင်းမှာ ၁၀ ယောက်
၃) ကိုယ်ဝန်ရှိသူ၊ မီးဖွားပြီးစမိခင် အယောက် တစ်သောင်းမှာ ၂၉ ယောက်ကနေ အယောက် ၄၀၀
ဆီမှာ သွေးခဲဖြစ်နိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်။
အရင်က ခြေထောက်သွေးခဲဖြစ်ဖူးသူဆိုရင်တော့ မသုံးသင့်ပါဘူး။ Progesterone တစ်မျိုးပဲပါတဲ့သန္ဓေတားနည်းလမ်း (ထိုးဆေးကလွဲလို့) နဲ့ ဟော်မုန်းမပါတဲ့ သန္ဓေတားနည်းလမ်း ( သားအိမ်တွင်းထည့် သန္ဓေတားပစ္စည်း၊ ကွန်ဒုံး )တွေကို သုံးသင့်ပါတယ်။ တစ်ပတ်ထက်ကျော်ပြီး မလှုပ်မရှားဘဲနေရမဲ့ အခြေအနေ( ခွဲစိတ်မှု၊ ခြေထောက်ကျိုးတာ)ဖြစ်လာရင် သန္ဓေတားဆေးကတ်ကို ခဏရပ်ထားပြီး ကွန်ဒုံး၊ ရက်ရှောင်ခြင်း စတဲ့နည်းလမ်းတွေသုံးရပါမယ်။ ပြန်လှုပ်ရှားနိုင်ပြီး နောက် ၂ ပတ်မှ သန္ဓေတားဆေးကတ်ကို ပြန်စသင့်ပါတယ်။
အရင်က ခြေထောက်သွေးခဲမဖြစ်ဖူးဘူးဆိုရင်တော့ သန္ဓေတားဆေးကတ်ကို သုံးလို့ရပါတယ်။
Davidson’s Principles and Practices of Medicine 23rd edition
Family Planning: A Global Handbook for Providers 2018 edition
>>> ကိုယ်ဝန်ဆောင် နဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး ဗဟုသုတတွေ အမြဲဖတ်ရှုနိုင်အောင် MATE – မိတ် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး page ကို Like and see first လုပ်ထားဖို့ မမေ့နဲ့နော့်။
Comment boxမှာဖြစ်စေ၊ Chat Box မှာဖြစ်စေ၊ Hot Line (၀၉ ၄၃ ၁၁၁ ၀၀၀) ကို ဖုန်းဆက်ပြီးဖြစ်စေ ဆရာဝန်၊ ဆရာမတွေနဲ့ အခမဲ့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးလို့လည်း ရတယ်နော် ။
တနင်္လာ ကနေ သောကြာ မနက် ၉း ၃၀ ကနေ ၄ နာရီ အထိ ပြန်ဖြေပေးပါတယ်။
Previous post မီးဖွါးပြီး မေမေတို့ ရွေးချယ်စရာ ကိုယ်ဝန်တားနည်းများ
Next post အဝလြန္ျခင္းနဲ ့ကေလးရနိုင္ေခ်